Azonao atao ve ny manampy ahy hahalala momba ny lalao Amazon rehetra?
Eny, afaka manampy anao amin'ireo singa fototra ao amin'ny SEO aho mba hazava tsara ny fizarana Amazon. Ireto ambany ireto no hametrahako ny fifantohan-kevitra mifantoka indrindra amin'ny tomban'ezaka momba ny fanamarinana mifototra amin'ny ambaratongam-panazavana Amazon dia milefitra amin'ny isam-pamokarana ny isam-pamokarana rehetra amin'ny fikarohana. Mariho anefa fa nanapa-kevitra ny hanilika ny lozam-pahaizana voalohany amin'ny Amazon aho - satria noho ny fijerena ireo fotodrafitrasam-panazongozon'ny amboara Amazon dia nanazava fa afaka manatsara ity sehatr'asa momba ny SEO sy ny vokatra momba ny lisitry ny vokatrao ianao. Ny tiako holazaina dia mety ho mora kokoa ny manatsara kokoa ny vokatr'izany, fa tsy ny toetra hafa rehetra amin'ny Amazon.
Nohazavaina ny Amazon Rankings: Fikarohana mifandraika izay niova fo
Misy singa maromaro vitsivitsy amin'ny lisitry ny vokatrao izay azo atao haingana - inona no tokony hifantohana amin'ny fanaovana ny vokatra ho hita eo an-tampon'ny fikarohana an-tserasera Amazon. Amin'ny ankapobeny, Amazon dia mampiasa ireto singa manaraka ireto mba hamantarana izay tsy maintsy aseho amin'ny mpampiasa amin'ny fangatahana karoka:
Ny vidin'ny vokatra.
Teny manan-danja lehibe sy teny lava fohy.
Fahaizana voafaritra voafaritra amin'ny loko, modely, sokajy, sns.
Product tahiry azo.
Tantara farany momba ny varotra.
Star ratings sy fanamarihana mifandraika amin'ny mpanjifa.
Tsindrio ny volavola voaray avy amin'ny mpividy.
Fanazavana ny amboara: Ny lisitry ny vokatra izay mivarotra
Raha ny marina, ny lohatenin'ny lisitry ny vokatrao dia azo lazaina ho iray amin'ireo fotodrafitrasam-panazavana tena manan-danja indrindra. Izany no antony hanoroako fanamarinana indroa amin'ny fananana ny zava-drehetra mba hahafahan'ireo mpividy hahitanao izay tena tadiaviny. Mariho anefa, fa na eo aza ny lohateninao sy ny famariparitana ny vokatrao dia tokony ho toerana tokony hametrahana ny teny fototra tianao ho lazainao, ary ny fanamafisam-peo miaraka amin'ny teny fanalahidy dia hanana vokatra mifanohitra amin'izany. Noho izany, ataovy izay hahazoana antoka fa ireto singa ireto dia mazava sy mazava tsara mba hahatratrarana ny vokatra tsara azo atao:
Marika ny vokatra.
Product Line Related.
Loko, Material, Size (na Dimension).
Noho izany, avelao aho hametraka izany indray mandeha indray - ny fanamby lehibe dia ny mamela ny ankamaroan'ny teny fototra tena manan-danja indrindra, noho izany dia mihazona izany tsipika mahasalama ny fampiasana tsara sy . Ary tsarovy - ny lohatenin'ny vokatra tsara dia ny tena mahatonga ny mpampiasa hanome sivana bebe kokoa amin'ny lisitry ny vokatrao. Midika izany fa afaka miantoka ny avoakan'ny Click-Through-Rate ianao - manome ny mpividy ho sary mazava sy ilazana fotsiny momba ireo toetra sy tanjona fototra azonao.
Farany, manolotra soso-kevitra amin'ny fijeriko fohifohy ny torolalana fototra amin'ny Amazon. Diniho ireto soso-kevitra manaraka ireto rehefa mameno ny fikarohana momba ny vokatrao ianao:
Ny endri-panadiovana rehetra dia manana tarehintsoratra 50 ahafahana mameno.
Ny fampiasana ireo teny mitovy (ny fiovan'izy ireo na ny fomba fiteny) dia tsy tokony ho fepetra takiana tsy tapaka mihitsy.
Na dia tsy mahatsapa mihitsy aza ny komôs, tokony hampiasaina ny fampiasana sora-baventy.
Tena variana ny LSI sy ny karazan-tsipelina, ary koa ny synonyms.
Tenin'ny baiboly mahatsapa ny fahasamihafana sy ny fahasamihafana Source .